ISOFTWARE EPHAMBILI YEKHITSHI YOYILO LWEKHABHINETHI EYI-17 (YASIMAHLA KUNYE NEHLAWULELWEYO) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Isoftware ePhambili yeKhitshi yoYilo lweKhabhinethi eyi-17 (yasimahla kunye nehlawulelweyo)
Apha sivavanya izixhobo zekhompyuter zekhitshi yoyilo lwekhitshi ezili-17 zokulungisa ngokutsha okanye ukuyila kwakhona indawo yakho. Ezi nkqubo zombini zisimahla kwaye zihlawulwe iinkqubo zokulungisa ikhitshi ezinokusetyenziswa ngaphandle kwexesha elininzi okanye imali. Zihambile iintsuku xa ukuyila iikhabhathi zasekhitshini bekusokolisa ngemfumba yemisebenzi yezandla enjengokubhala amanqaku, imilinganiselo kunye noluhlu lwamaxabiso, ukubaleka kuyilo, uyilo okanye umyili ukuyizobela, ekugqibeleni ineemvavanyo ezininzi kunye neempazamo. Itekhnoloji yazise isoftware emininzi enokuyila ikhitshi lakho kwelona xesha lifutshane ngemilinganiselo echanekileyo, uyilo olunemilinganiselo emithathu kunye nezicwangciso kunye nembono ye-panoramic engama-360.
Nazi ezinye zeendlela zokuyila isoftware yekhabinethi enokukunceda:
• Ukusebenzisa isoftware yoyilo ekhitshini kungangqina ukuba kubiza indleko kwaye konga ixesha xa kuthelekiswa nomyinge womsebenzi wezandla ofunekayo kunye nokuqesha umyili okanye umyili wedrafti ukucelela wena.
• Uninzi lwezi software lusimahla, luyafumaneka kwi-intanethi ukuba ufuna ukuyila ubume bekhitshi olusisiseko okanye ukuba uzimisele ukusebenza ngendlela enobuchule ngakumbi eneenkcukacha ezinzulu kunye nezixhobo ezongezelelweyo eziqhelekileyo unokukhetha enye yeenguqulelo ezihlawulelweyo.
• Ngoncedo lwezixhobo kunye neevidiyo zokufundisa onokuyila ikhitshi lakho kwaye ulibone ngeso lengqondo, kulula ukuba unikeze i-3D ngexesha lokwenziwa kwento naxa unika imiyalelo kumenzi wekhabhinethi okanye kumchweli.
• Iikhathalogu zemveliso ezikwi-intanethi kunye nemilinganiselo esemgangathweni eza nezona zininzi zezi nkqubo zesoftware zinokukunceda kuyilo lwekhabhinethi yakho yasekhitshini. Zininzi iimodeli ze-3D kunye nolungiselelo lwekhitshi onokukhetha kuzo olunokukukhokela kwinkqubo.
• Ukongeza uninzi lwesoftware lunokukunceda ngombala, ipeyinti kunye neengcebiso ngezinto kunye nokongeza kuyilo lwezixhobo kunye neetafile.
Makhe siqwalasele isoftware ephezulu yokuhlawula nekhitshi yasimahla ekhitshini enokukunceda kuyilo lwakho kunye neemfuno zesalathiso.
Iindleko-Simahla / kwi-Intanethi
Isoftware eyaziwayo ekhompyutheni eyila i-Autodesk enikezela ngocwangciso lwe-2D kunye nemodeli ezinikezelweyo ze-3D, i-360 degrees panoramic view kunye neendlela zokuhamba. Elinye inqaku lokudibanisa lenzelwe injongo yoyilo lwasekhaya nasekhitshini ke ngoko ibandakanya ikhathalogu enamagama amakhulu eentlobo kunye nezinto ezahlukeneyo zala maxesha ezigqityiweyo onokukhetha kuzo.
• Imifanekiso inokungeniswa ngaphakathi kwaye iimodeli ze3D zinokuthunyelwa kwelinye ilizwe ngokuthatha umfanekiso wemodeli. Izicwangciso zomgangatho we-2D zinokuthunyelwa ngaphandle njengefayile ye-DWG. Nangona isoftware ekwi-intanethi, uyilo lunokugcinwa nanini na kwaye lusebenze kulo kamva.
yintoni isipho seminyaka engama-30 somtshato
Le app isebenza kakuhle kugoogle chrome, internet explorer 11 nangaphezulu kunye nenguqulelo yamva nje yeFirefox.
• Nangona le software ibandakanya izinto ezimangalisayo ze-intanethi, ayihlangabezani nomgangatho wokunikezelwa ofunekayo.
Indawo yeWebhusayithi - https://www.homestyler.com/
• Amakhonkco okufundisa https://www.youtube.com/watch?list=PLD2617D775224DEBF&v=AEsVdNe1Z1I
Isoftware yoyilo lweKhabhinethi yeSmartdraw
Ixabiso - Idemo yasimahla / uguqulelo oluhlawulelweyo olubiza i-197 / Standard kunye ne- $ 297 / yeShishini
• ISmartdraw sisoftware enamandla ehlawulelweyo enika ingxelo yedemo yasimahla yexesha elimiselweyo. Ungasebenzisa windows uhlelo lwe desktop okanye uguqulelo olukwi-intanethi olufanayo nakweyiphi na iPC okanye ithebhulethi.
• Inkqubo ingasetyenziselwa ukuyila ubume bekhitshi ye-2D kunye noyilo lwekhabhathi yekhitshi enoluhlu olubanzi lweetemplate ezikhoyo kunye nezinto ezifana nekhabhathi, imiphezulu yeetafile, izinto zalapho kunye nezinto onokukhetha kuzo. Unokwenza isicwangciso somgangatho we-2D kwaye usebenze ngeenxa zonke.
• Inokhetho lokungenisa elizweni i-DWG kunye ne-DXF kunye ne-DXF kunye ne-PDF yokuthumela ngaphandle
• Nangona iyisoftware enamandla, yenziwe ngokubanzi kwaye awunakuyila uyilo lwe-3D kunye nokuhamba ngale nto.
Indawo yeWebhusayithi - https://www.smartdraw.com/software/cabinet-design-software.htm
• Ikhonkco lokufundisa - https://www.smartdraw.com/getting-started/
Iindleko-Isoftware yasimahla ekwi-intanethi exhasa usetyenziso lweselfowuni ukulandela iiprojekthi zekhaya
• Isebenziseka lula, isoftware esebenzayo ye-3D enokukunceda ucwangcise ubume bekhabhinethi yakho yasekhitshini kwimizuzu nje embalwa. Ifanitshala, ikhabhathi kunye nezinto ezinokufundwa kunokukhethwa kwikhathalogu ebonelelweyo. Ungayila ikhitshi ngemilinganiselo echanekileyo kwi-2D kwaye wenze imodeli ye-3D yokujonga okanye ukuhamba.
• Ukunikezela ngomgangatho ayisiyonto intle kwaye ayinazinto zininzi zokukhuphela kunye nokungenisa isoftware yeCAD.
Indawo yeWebhusayithi - http://opunplanner.com/
• Amakhonkco okufundisa - https://www.youtube.com/watch?v=wqhuzGx9NWc
Ikea 3D Isicwangcisi seKhitshi
Iindleko-Simahla, simahla kwi-Intanethi
• Isoftware yokucwangcisa ikhitshi yi-IKEA yenye yohlobo lwayo. Ngeetemplate ezininzi kunye nekhathalogu yemveliso efumaneka kwivenkile ye-IKEA unokucwangcisa ikhitshi ngokulula. Ungazoba isicwangciso se-2D kwaye uguqukele kwimodeli ye-3D kunye nokubandakanywa kweemveliso kwikhathalogu ye-IKEA.
Isicwangciso siqulunqa uluhlu lokuthenga kunye namaxabiso kunye neenkcukacha ukuze ube nombono weendleko zizonke kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Ubungakanani beKhabinethi bumgangatho njengakwilizwe lokwenyani ukuze ukubekwa kungakunika umbono ochanekileyo wekhitshi lakho.
• sisixhobo esifanelekileyo ukuba ufuna ukuyila ikhitshi elisisiseko okanye ikhitshi le-IKEA nangona kunjalo aliboneleli ngekhathalogu ebanzi kwaye ayinakuthathwa njenge-software esemgangathweni yoyilo lwekhitshi elinenani eliqingqiweyo lezinto kunye nokukhetha okungathunyelwanga ekuthumeleni nasekungeniseni elizweni. Ngaphandle koko ayiboneleli ngokuhamba okanye umbono wekhamera kwaye umbono we-3D awunyani kangako.
• Nangona umcwangcisi we-IKEA ehambelana neewindows kunye ne-mac ixhasa kuphela iinguqulelo ezingama-32bit.
Indawo yeWebhusayithi - http://www.ikea.com/ms/en_MY/customer_service/ikea_services/kitchen_planner.html
• Ikhonkco lokufundisa - https://www.youtube.com/watch?v=u-3YKOxYCCI
Iindleko-Isivivinyo sasimahla, uguqulelo oluhlawulelweyo kwidesktop / kwi-Intanethi
• Uyilo lwekhitshi lwe3D olunamandla kunye nesoftware yekhabinethi evumela ukubonwa kwe3D, iiplani, iidigri ezingama-360 zembono yepanoramic kunye neendlela zokuhamba. Ibandakanya ikhathalogu yemveliso ehlaziywa rhoqo kunye neemveliso ezivela kwizixhobo ezivela kubavelisi abangaphezu kwama-300 ke ngoko unokubandakanya nayiphi na imveliso kuyilo lwakho kwaye uyijonge ngaphambi kokuthenga.
Ingxelo epheleleyo iyabiza kodwa ungabhalisela uvavanyo lwasimahla kwaye uyisebenzisele iimfuno zakho. Umgangatho wokunikezelwa kwemodeli uyinyani kwaye le software iyahambelana nazo zombini iiWindows kunye neMac. Umfanekiso wokugqibela ungagcinwa njengeJPEG.
• Akukho zindlela zininzi zithunyelwa ngaphandle.
Indawo yeWebhusayithi - http://www.prokitchensoftware.com/
Amakhonkco okufundisa- https://www.youtube.com/embed/1pfQaZ0OmGU?vq=hd720
Isoftware yoyilo lweKhitshi yoyilo
Iindleko-Uhlobo oluhlawulelweyo $ 32
Le software yoyilo lwekhitshi ye-HGTV iza nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali, ngaphandle kwengxaki, kulula ukusebenzisa izixhobo kunye neengcebiso ezivela kwi-HGTV. Ibandakanya ikhathalogu yemveliso, izixhobo kunye nemibala onokukhetha kuyo, ikhitshi yomakhi we-2D kunye nefoto ye-3D enikezela ikhitshi. Iipanorama ezingama-360 kunye neendlela zokuhamba nazo zibandakanyiwe kwiimpawu zayo. Imifanekiso inokungeniswa ngaphakathi kwaye iifayile zingathunyelwa ngaphandle njengePDF.
• Iyahambelana neefestile kunye neMac.
• Ukungabikho kokukhetha ukuthumela kwelinye isoftware yeCAD.
Indawo yeWebhusayithi - http://www.homedesignsoftware.tv/features-kb/Kitchen-Design-Software/
Amakhonkco emfundo- http://www.homedesignsoftware.tv/How-to-Videos/?preflanguage=5&rs=57&cc=20OFFSAVE
Isoftware yoyilo yasekhitshini ka-2020
Ixabiso - Uhlobo oluhlawulelweyo- $ 2050-2400, usetyenziso lweselfowuni
Isoftware yoyilo lwasekhitshini yowama-2020 sisixhobo esiphambili sokwenza inkcazo ephezulu yokunikezelwa kwekhitshi kunye neendawo zangaphakathi. Ibandakanya ikhathalogu yemveliso ebanzi, uhlengahlengiso lokukhanyisa, ubeko lwe-2D, imodeli ze3D kunye nokwenza iipanorama ezingama-360 kunye neendlela zokuhamba.
Unikezelo lunomtsalane kakhulu kwaye unokungenisa izinto ze-3D kunye nezicwangciso zomgangatho kwizixhobo zoyilo ze-2020. Nge-sensopia Magicplan app unokulinganisa iiplani ngesixhobo sakho se-android okanye se-iPhone.
• Iyahambelana neewindows 7, 8 kunye ne-10 kunye neMac.
• Inokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle iifayile ze-DWG kunye ne-DXF.
• Ixabiso lesoftware lixhome kakhulu kwaye ingxelo yolingo ifuna isicelo kwinkampani engafunekiyo.
Indawo yeWebhusayithi- https://www.2020spaces.com/
• Amakhonkco ezifundo - https://www.youtube.com/watch?v=v34zKFJ2yuI
Izinto zangaphakathi zoyilo lweKhaya
Iindleko - Kuhlawulwe i- $ 79.00
Isoftware yoyilo lwasekhaya ingumlingisi ophumelele igolide ngesoftware yoyilo ekhitshini yango-2017 ngenxa yezixhobo ezikhulu kunye neempawu ezibonelelwa yisoftware. Nangona sisicwangcisi sangaphakathi sisonke izixhobo zayo kunye nomyili okhethekileyo wekhabhinethi unceda ukucwangcisa iikhabhathi zasekhitshini ngokulula.
Ilayibrari yesoftware ibandakanya izinto ezingama-5000 kunye nezinto ezingaphezu kwe-100 onokukhetha kuzo. Ungangenisa imifanekiso, i-SKP, i-OBJ kunye ne-3D kwaye uthumele ngaphandle ngePDF, kwifom ye-DXF. Ibandakanya iiplani ze-2D, uyilo lwe-3D, umbono wekhamera, ukhenketho lweedigri ezingama-360 kunye nokuhamba.
Enye inzuzo kukuba unako ukuvelisa ispredishithi ngeendleko kunye nobungakanani. Le mveliso iyahambelana nesoftware eyintloko yoyilo.
Ukucwangciswa kwe-2D kulula kakhulu kunemodeli ye-3D kwaye ayiboneleli ngeendlela ezininzi zokuthumela ngaphandle kwenye isoftware.
Indawo yeWebhusayithi - https://www.homedesignersoftware.com
• Amakhonkco eTutorial- https://www.homedesignersoftware.com/videos/watch/2251/cabinets.html?playlist=204
I-Punch yangaphakathi yoyilo loyilo
Iindleko-Kuhlawulwa i- $ 40.00, kubandakanya usetyenziso lwe-iPhone.
Isoftware enexabiso elifanelekileyo efumanekayo kwimarike yanamhlanje, iPunch ibonelela ngesakhono sokuyila iikhabhathi zekhitshi. Kubandakanya ilayibrari engama-3000, iitemplate zasekhitshini, umlinganiso kunye noqikelelo lweendleko, umyili wekhabhathi yekhitshi kunye nezixhobo zekhompyuter zekhompyuter.
I-Punch ikwaqhayisa ngobeko beplani ye-2D, uyilo lwe-3D, ukhenketho olubonakalayo kunye nokuhamba. Umgangatho wokunikezelwa kwesoftware wamkelekile. Iyahambelana neMac kunye neewindows PC.
• Nangona ungangenisa imifanekiso kunye nohlobo lwamva nje lwe-sketchup yokungenisa, iPunch ayinazinto zininzi zinokukhethwa ngaphandle. Ithatha ithutyana ukufunda ujongano lomsebenzisi.
Indawo yeWebhusayithi - http://www.punchsoftware.com
• Amakhonkco emfundo- http://www.punchsoftware.com/tvideos-Winv19.aspx#B2C_Content
Iindleko-Uhlobo oluhlawulelweyo, iindleko ziyahluka.
• Le software yoyilo lweKhitshi enikwe amandla yi-AutoCAD sisoftware enobunkunkqele ngokuqhayisa ngokuba yeyona 'software inekhono yoyilo ekhitshini kwihlabathi liphela'.
Kubandakanya ngaphezulu kwe-2000 elele kwiikhabhathi zomnyango, ezingama-2400 kwiikhabhathi zesakhelo ezinokuthi ziguqulwe, ikhathalogu ebanzi yekhabinethi kunye namakhulu okhetho lwezixhobo, izixhobo zombane kunye nezinto zokusebenza onokukhetha kuzo. Ukungenisa ngaphakathi kunye nokuthumela ngaphandle kwe-DWG kuyafumaneka. Inokhetho lokuyila imifanekiso ye-HD yokufota, ukuhamba, kunye nembono ye-panoramic engama-360.
• Isoftware ibandakanya zonke izinto ezibalulekileyo eziyimfuneko kwisoftware yeCAD. Ixhasa ii-DWFs, ii-PDFs, ii-JPG, ii-BMPs kunye neefayile ze-DXF.
Izintlu zeeprojekthi zinokuthunyelwa ngaphandle njengamaspredishithi aphezulu okanye zijongwe nakwi-AutoCAD. Ezinye izinto zibandakanya ukungenisa izinto kwe-3D, ukulahla izinto, ukuzihlela, ukuzinikela, kunye nokwenza umbono wepanoramic okanye iklip yokubonisa yokuhamba. Phrinta uluhlu lwekhabhinethi oluneenkcukacha njengoko usebenza okanye usenza ngokwezifiso ikhathalogu yakho yekhabhinethi.
Nangona ihambelana neewindows, ifuna inkampu yokuqalisa okanye iinkcukacha ezifanayo kwiifestile ukuze zisebenze kwiMac.
Icala elisezantsi lelokuba kufuneka uthenge iikhathalogu ukuze usebenzise kakhulu isoftware.
Indawo yeWebhusayithi- http://en.autokitchen.com/
• Ikhonkco lokufundisa - https://www.youtube.com/watch?v=4BjhgEjb87E
• Amakhonkco ezifundo - https://www.youtube.com/watch?v=OfZOguYr5zQ
Iindleko-Simahla nesimahla ehlawulelweyo i $ 695 USD
• Olunye loyilo olunamandla, oluthembekileyo kumawakawaka abantu kwihlabathi liphela. I-Sketchup 3D ibandakanya uhlobo olusisiseko simahla olwaneleyo kuyilo olulula lwekhitshi kunye nohlobo lobuchwephesha obuhlawulelweyo apho unokusebenzisa isoftware ngokugqibeleleyo.
Inkqubo ibandakanya amakhulu iiplagi kunye nezandiso, kunye nendawo yokugcina izinto ezinamawakawaka izinto ze-3D, iimveliso, itemplate kunye namagumbi onokukhetha kuwo.
Apho ikhabinethi ekhitshini ichaphazelekayo, unokwenza ngokulula enye okanye ukhuphele kwindawo yokugcina izinto kwaye uyihlele. I-Sketchup ingangenisa i-DWF, i-DXF, i-PDF, kunye nee-3Ds kunye nokuthumela ngaphandle ngokufanayo. Unokunikezela ngemifanekiso yokwenyani ngezixhobo ezakhiwe ngaphakathi, faka iikhamera, ukukhanya kunye nesithunzi, kwaye wenze ukhenketho olubonakalayo kunye neembono zepanoramic.
• Isoftware yoyilo ngokubanzi ke ngoko ukuhlangabezana neemfuno ezithile zoyilo lwekhabhinethi, iiplagi kunye nezandiso kufuneka zikhutshelwe.
Indawo yeWebhusayithi - https://www.sketchup.com/buy/sketchup-pro
• Amakhonkco ezifundo - https://www.youtube.com/watch?v=t54Lzem0pVw
Prodboard kwi-Intanethi uMcwangcisi wekhitshi
Iindleko-Isixhobo simahla kwi-Intanethi
Umcwangcisi wekhitshi kwi-Intanethi yiProdboard sisixhobo esisisiseko sokuyilwa kwekhitshi esinokusetyenziswa kwi-intanethi enokwenzeka ngesisombululo sefu samva nje. Unokukhetha iikhabhathi, uzilinganise kwaye uzibeke ukwenza imodeli ye-3D yokujonga.
Umbono we-360 Degree unokwenziwa, iindleko kunye noqikelelo zinokwenziwa nazo. Yenzelwe ngokukodwa injongo yoyilo lwekhitshi. Nangona sisixhobo sasimahla, sinokwenza imifanekiso eyi-3D yokwenyani.
• Iinguqulelo zasimahla zibonelela ngezixhobo ezinqunyelwe kunye noyilo, ziyasebenza nakwisicwangcisi esikwi-Intanethi. Ayinazimpawu zibalulekileyo kunye nokuthumela ngaphandle, ukhetho lokungenisa kunye.
Indawo yeWebhusayithi - https://prodboard.com/planner/
• Amakhonkco ezifundo - https://www.youtube.com/watch?v=-D-BzQf_mLU
Isoftware yeKhabhinethi yesiqhelo
Iindleko- $ 495-2295 $ qho ngonyaka ibandakanya uvavanyo lwasimahla lwetyala
Isoftware yekhabhinethi yesiqhelo njengoko igama lisitsho, ligxila kuphela kuyilo lwekhabhinethi, amaxabiso ekhabhinethi kunye nemveliso.
Isoftware esisiseko yesisombululo sekhabhathi ibandakanya i-2D kunye nemizobo ye-3D kunye nokunikezelwa, uqikelelo lwamaxabiso, uluhlu olusikiweyo kunye noyilo lwekhabhinethi yesiko. Iyahambelana neewindows PC kwaye inikezela ngenkxaso yobuchwephesha elungileyo.
• Icala elibi kukuba isoftware ibiza kakhulu kwizinto ezinikezelayo kwaye ayibandakanyi ukhetho oluninzi lwangaphandle kunye neempawu.
Indawo yeWebhusayithi - https://www.customcabinetsoftware.com
• Amakhonkco okufundisa - https://www.youtube.com/playlist?list=PLBD34FCFE7639AE76
Ixabiso: -Simahla kwiifestile, iapile kunye ne-android
• IsiCwangcisi 5D sisisombululo simahla sangaphakathi sokuyilwa, esinokuthi senziwe simahla, sinike uyilo olululo. Inguqulelo ibandakanya ikhathalogu elinganiselweyo, izicwangciso ze-2D kunye neemodeli ze-3D kunye nokunikezelwa, iipanorama ezingama-360 kunye nemithwalo yokwakheka kunye nezinto onokukhetha kuzo. Isoftware ayifuni kunye nezakhono ezizodwa zokusebenza kwaye inokubonelela ngezisombululo ezikhawulezayo.
• Ezantsi kukuba iyahambelana windows 10 kuphela, ayibandakanyi ukhetho lokuthumela ngaphandle kunye nohlobo olupheleleyo lwekhathalogu kufuneka ithengwe ukuze isebenze kwiPC yakho. Okwesibini yenziwe ngokubanzi kwaye isetyenziselwa uyilo lwekhabhathi yekhitshi kuphela, ukhetho lwezinto luthintelwe.
Indawo yeWebhusayithi - Umcwangcisi 5D
• Ikhonkco lokufundisa - https://www.youtube.com/watch?v=Z9dW5HX3dA8
Iindleko-ezihlawuliweyo / zokurenta nge- $ 95.00 ngenyanga
Isoftware ye-KCD yi-2D kunye nesoftware yoyilo ye-3D ekhethekileyo yokuyilwa kwekhabhinethi. Ke ngoko kubandakanya ubunzulu beempawu ezinxulumene nekhabhathi enje ngamaxabiso, uqikelelo, ikhabethe yesiko, iiprofayile zomphetho weetheyibhile, izitayile zomnyango njl.njl. Kubandakanya ukunikezelwa kwe3D kunye nenketho yokuhamba. Iyahambelana neewindows 7, 8 kunye ne-10.
uyimisa njani ingxowa-mali yokutshata
• Le software ayibandakanyi uhlobo lwasimahla, ingxelo yolingo inokuthengwa njengerenti. Nangona ine-interface yomsebenzisi eyenziwe lula, inobuchwephesha kwaye ilungele ngakumbi abenzi bekhabhinethi.
Indawo yeWebhusayithi - http://kcdsoftware.com/CabDesigner.html
• Ikhonkco lokufundisa - http://kcdsoftware.com/video-tutorials.html
Uluhlu lweSketchlist 3D
Ixabiso- inguqulelo yovavanyo, ihlawulwe i $ 200-750
• Uluhlu lweSketchlist 3D sisixhobo esinamandla sokuyila izinto ezinokusetyenziselwa ukwenziwa kwekhabinethi yekhitshi. Kubandakanya ilayibrari esemgangathweni yoyilo lwekhabhinethi olusisiseko kunye nezixhobo ezinokufakwa kunye nobungakanani njengoko kufuneka. Ukhetho lokungenisa umfanekiso lukhona kwaye uyilo lunokukhuphela ngaphandle kumfanekiso kunye nefayile ye-DXF. Enye inzuzo kukuba inokuvelisa iingxelo njengoko usebenza kunye.
• Ukugcina iindleko, akufanelekanga ukuba uchithe kuyo ngenjongo ye-DIY ngaphandle kokuba uceba ukuyisebenzisela ikhabhathi yobungcali kunye neemfuno zokusebenza kweenkuni.
Indawo yeWebhusayithi - https://sketchlist.com/
• Ikhonkco lokufundisa - https://www.youtube.com/channel/UC17r2L0Of_-ddvJjaiHvRbQ
Iindleko-Isilingo sasimahla, Kuhlawulwa i-2550 yeedola
Isoftware yoyilo lwekhabhathi ye-3D ebandakanya izinto eziyimfuneko ekwenzeni ikhabinethi njengoluhlu olusikiweyo, amaxabiso, imilinganiselo, umhleli womilo, kunye nomenzi wakho wekhathalogu.
Unokujonga imifanekiso ye-photorealistic kunye nembono ye-panoramic. Izinto ze-3D zinokungeniswa kwezinye iinkqubo ze-CAD. Iyahambelana neewindows kunye neePC zeMac.
• Ixabiso eliphezulu lesoftware licala elisezantsi koku ngaphandle kokuba usebenza ngokukodwa kwikhabhathi kwaye kufanelekile ukuchitha.
Indawo yeWebhusayithi - https://www.pro100usa.com/
• Ikhonkco lokufundisa - https://www.pro100usa.com/tutorial-videos
Iindleko - $ 975 ukuya phezulu
Isixhobo seSoftware esikhethekileyo kuyilo lwekhabhinethi njengoko igama lisitsho. Ibandakanya amanqaku esoftware yoyilo lwekhabinethi enje ngokuyila i-3D, amaxabiso kunye noqikelelo, umlinganiso kunye nokudweliswa njl.njl. Iikhathalogu zibandakanya iinxalenye zekhabhinethi ezingenamda, izixhobo kunye nokugqitywa. Ikwabandakanya ukhetho lwe-DXF yokuthumela ngaphandle kunye nokungenisa.
Isoftware yeKhabinethi ye-Pro ineenguqulelo ezahlukeneyo ezinamaxabiso awahlukeneyo kwaye uninzi lweempawu zibandakanyiwe kwisoftware yodidi oluphezulu, ke ngoko ukuthenga uhlobo lwe-lite kuya kubonelela kuphela ngezinto ezinomda ezaneleyo kwi-DIY kunye nenjongo yoyilo olusisiseko.
Indawo yeWebhusayithi - http://www.cabinetpro.com/
Ikhonkco lokufundisa-liyafumaneka xa uceliwe kwinkampani
• Ixabiso - kuqala iiyure ezingama-20 simahla emva koko zi-euro ezi-3 ngeyure
• Le khitshi kunye nesoftware yoyilo lokuhlambela iyamangalisa enye yohlobo lwayo ukuba unenjongo yokwenza ikhitshi le-DIY kunye nokucwangciswa kwekhabinethi. Uninzi lwesoftware ihlawulwe okanye isimahla kukhetho olunqunyelwe, le software inexesha lamahhala leeyure ezingama-20 emva koko uhlawula umrhumo ngegama njengoko uqhubeka.
Kubandakanya ukhetho lokwenza ngokwezifiso iikhathalogu, kunye nexabiso lokuprinta kunye noluhlu lokusika. Iifayile ze-SKP, 3DS kunye ne-DXF ziyaxhaswa. Nangona kungabandakanyi ukuhamba, unokwenza isicwangciso se-2D, ukuphakama kunye nokuhanjiswa kweefoto.
• Iyahambelana kuphela neewindows 7 kunye ne-8.
Indawo yeWebhusayithi - http://www.kitchendraw.com/
• Ikhonkco lokufundisa - http://www.kitchendraw.com/trainingtutorial.htm
Jonga la maphepha ayiliweyo angaphakathi yoyilo:
Isoftware yoyilo lwangaphakathi - Isikhokelo seNdleko yokuLungisa iikhitshi - Uyilo lweKhitshi Iingcamango
into eluhlaza okwesibhakabhaka yomtshakazi
Ngaba u-bruno mars unabantwana
ukutshintsha igama emva komtshato kwi pa
gcina amakhadi omtshato omhla
iingoma zomfana (ibhendi)